Sleejinta Siraha / Sleeing-qaadista - jarista, dixiriga dixiriga, gearboxyada dixiriga ah, sanduuqyada meerayaasha meerayaasha, xawaare yareeyayaasha, kala-duwanayaasha, maareynta buugaagta, qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'sprial bevel gear', gearboxes-yada beeraha, cagafyada gawaarida, qalabka xamuulka, dirxiga
Bogga ugu weyn / Gear / Wareegga Swing / Sleewing Saring
Wareegyada xajintu waxay habeyn kartaa axial, radial iyo daqiiqado xamuul ah oo kali kali ah ama isku dhafan iyo jiho kasta. Kumana rakiban guri ama wiish, laakiin si toos ah ayay u saaran yihiin meel fadhiga ah. Fargallada gudaha iyo dibaddaba waxaa la siiyaa godad dhejis ah. Labada siddoba waxay yeelan karaan geeris aan loo baahnayn. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'ringings' iyo miisaska miiska. Xayiraadaha giraanta kala bixintu waxay sameyn kartaa oscillating (jeexitaan) iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo wareega ah. Waxaa loo isticmaali karaa qalab la'aan ama geerka gudaha ama dibedda.
Wareegyada isdaba-joogga ah ayaa ah mashiinnada xajmiga weyn ee qaadi kara axial sare, culeysyo shucaac ah iyo daqiiqado rogaya. Wareegyada isdabajoogga ah waxaa badanaa lagu qaybiyaa godadka sii kordhaya, geerka gudaha ama geerka dibedda, godadka saliida leh ee qalabka wax lagu xiro. Iskudhufka qulqulka qulqulaya ee iskutallaabta ayaa leh awoodda firfircoon ee weyn.
Wareegyada gawaarida waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa wiishyada, mashiinnada dhismaha, dekedda iyo farsamooyinka shi iyo miisaska rogaya ee sare ee raadaarrada iyo gantaallada lagu rido
1.foor-dhibic xiriir kubbadda xajinta (majiro, marsho ka baxsan, qalabka gudaha);
Kubbadaha isku laba-laabka laba-laabka ah;
3.crossed silsilad xarig ah oo qulqulaya (ma jiro qalab, marsho ka baxsan iyo qalabka gudaha);
4.reer sadarro silsilad isku xidha xajinta
Faahfaahin dheeraad ah: Slewing Ring ring